မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: ခံစားမှု၏နိဂုံး “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
by Kyaw Thu on Friday, February 25, 2011 at 8:00am
သင်တို့နှင့်ကျွန်ုပ် . . . လျှောက်လှမ်းကြသည့်လမ်းတူချင်မှတူလိမ့်မည်။
သင်တို့နှင့်ကျွန်ုပ် . . . ရည်ရွယ်ချက်ခြင်းတူချင်မှတူလိမ့်မည်။
လောကကြီးကို ဖြိုခွင်းမယ့် အနုမြူတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ ယမမင်းဖြစ်သလို
လောကကြီးအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းပွင့်တွေကိုပွင့်စေနိုင်တဲ့ ဥယျာဉ်မှူးဖြစ်တယ်။
အဆိုးမြင်ဝါဒများကို မွေးဖွားပေးသော“ဗာလမိခင်” ဖြစ်သလို
ဒါမှ … ခံစားမှု မဇ္စျိမပဋိပဒါဥပဒေသ
ကျွန်ုပ်အတွက်တော့ ခံစားမှုတိုင်းဟာ ငြိမ်းချမ်းမှုပန်းပွင့်တွေကိုဘဲပွင့်စေနိုင်ရမယ်။
(လူမှုရေး … ပြည်သူ့အရေး … နိုင်ငံ့အရေးကိုစိတ်ဓါတ်မကျ စိတ်မပျက်ဘဲစွဲစွဲမြဲမြဲစိတ်နာနာနဲ့ ဖိလုပ်ခဲ့ရာမှ (၁၀) နှစ်ကျော်ကာလ၊ (၂) လ စွန်းစွန်းအချိန်ကာလမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ခံစားမှု)Rest of your post